Ny iPad Pro ... fitaovana sarotra amboarina | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iPad, iPad Pro
Ireo tovolahy ao amin'ny iFixit dia efa tokony hiasa amin'ny iPad Pro vaovao, araka ny nandrasana. Nanomboka nandroaka ilay fitaovana Apple vaovao izy ireo ary izany dia mitondra antsika ny antsipiriany rehetra momba ny fivorian'ny anatiny ny takelaka Apple vaovao. Ny fitaovana vaovao dia aseho amin'ny efijery lehibe 12.9-inch, miaraka amin'ny processeur A9X an'ny taranaka fahatelo sy ireo singa hafa nohavaozina, saingy… moa ve tsy hahagaga antsika ny ao anatin'ny iPad Pro vaovao?
Avy hatrany, ny zavatra voalohany tsikaritra rehefa manokatra ny fitaovana dia fandaminana hafa amin'ireo singa ao amin'ny solaitrabe anatiny. Ho fanampin'izany, azo natao ihany koa ny mandinika andian-dahatsoratra izay tsy misy antsipiriany ampahibemaso, fa tafiditra ao anatin'ny iPad Pro:
2 x Broadcom BCM15900Bo.
Semiconductor NXP 8416A1 ho an'ny sensor ID Touch.
Time controller Parade Technologies DP695.
Texas Instruments TPS65144
Ny iray amin'ireo antsipiriany manaitra indrindra amin'ny asan'ny iFixit dia ireo mpandahateny amin'ny fitaovana mampiasa antsasaky ny habaka na antsasaky ny habaka, toy ireo sela bateria ihany koa. Amin'ny ankapobeny, ny ekipa iFixit dia manome isa 3 amin'ny 10 ho an'ny iPad Pro ho an'ny fanamboarana ilay fitaovana paoma vaovao. Ny iray amin'ireo fanamboarana tsotsotra indrindra hitan'ny ekipa dia ny fanoloana ny bateria, izay tsy soloina amin'ny solaitrabe ary azo esorina amin'ny tadiny adhesive.
Ny faritra sasany amin'ny iPad Pro aza tsy azo atao mihitsy ny manamboatra na manolo. Ohatra, izany dia mitranga amin'ny seranan-tsambo Smart Connector, fa mampiditra ampahany tsy mihetsika, izay kosa, mampitombo ny tanjaky ny singa ary manakana azy tsy ho mora simba. Ny efijery, ho an'ny anjarany, dia tsy dia mora loatra ny manolo azy. Na ny takelaka LCD na ny tontonana fitaratra eo aloha dia mifangaro ho iray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ny iPad Pro… fitaovana sarotra amboarina
Heveriko fa tsy fahombiazan'ny fipoahana io. Toa zavatra goavana be izany amiko ary noho izany dia tsy mahazo aina.
Amin'ny tranga manokana, namidiko ny iPad hividianana iPad Mini 4 ary ity no notadiaviko. Ny iPad teo aloha dia iPad 3. Eny, tsy misy azo atao amin'ny lanjany amin'ny Air vaovao fa ny habeny nahatonga ahy tsy mahazo aina. Fantatro ihany anefa fa ho an'ny matihanina (ny rahalahiko dia mampiasa azy io matetika ho fitaovana miasa) ny haben'ny iPad dia rariny sy ilaina foana. Na izany aza, Pro ity, araka ny hevitro, lehibe loatra ary ny maha tsy mihoatra ny iPad misy vitamina ("ihany" dia manana iOS) dia mampihena tanteraka azy io.
Mazava ho azy fa ny fotoana hahatonga ahy na hanala ny anton'asako saingy matahotra mafy aho fa diso tanteraka i Apple ary ny fanambaràna farany nataon'i Cook manala baraka tanteraka ny PC sy ny Surface (na dia miantso ny tompony aza fa diso), heveriko fa tsy manampy be loatra izy ireo .
Disney Infinity 3.0 ho an'ny Apple TV dia tonga miaraka amin'ny baikon'ny SteelSeries Nimbus
PDF Expert 5, amboary ny PDF misy ny fampiharana ny herinandro